उद्योग सञ्चालन नहुँदा बिचल्लीमा उखु किसान - Online Majdoor
नवलपरासी, १० माघ । उखुको क्रसिङको याम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योग सञ्चालन नहुँदा किसान बिचल्लीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षको करीब रु. पाँच करोड चिनी उद्योगबाट नपाएका उखु किसान यस वर्षसमेत समयमै उद्योग सञ्चालन नहुँदा बिचल्लीमा परेका हुन् ।
मंसिरको पहिलो साताबाट उखु क्रसिङको याम सुरु भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म पश्चिम नवलपरासीका कुनै पनि चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन् । जिल्लामा इन्दिरा, लुम्बिनी र बागमती गरी तीन ठूला उद्योग छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा किसानले खेतमा लगाएको उखुबाली दिनप्रतिदिन सुक्दै गएकाले आफूहरू निकै समस्यामा परेको उखु किसानका अगुवा धीरज त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो । पटक–पटक किसानले उखुको भुक्तानी र मूल्य निर्धारणको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले दिगोरूपमा उखु खेतीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफूहरू निरास बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्षको बाँकी रकम नदिने र यस वर्षसमेत समयमै उखु क्रसिङ नहँुदा लगाएको उखु खेतमै सुक्दै जाँदा किसानमा निराशा बढको छ । पश्चिम नवलपरासीमा रहेको बागमती सुगर मिलले गत वर्षको करीब रु. चार करोड ५० लाख र इन्दिरा चिनी उद्योगबाट रु. ५० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानको जिकिर छ । राज्यले उखु बालीलाई राष्ट्रिय बालीको रूपमा घोषणा गरे पनि उद्योग व्यावसायीले यसलाई साकार बनाउन बेवास्ता गर्दा किसान समस्यामा परेको प्रदेशसभा सदस्य अजय शाहीको भनाइ थियो । वर्षौदेखिको बाँकी रकम भुक्तानी नपाउनुका साथै समयमै उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा दोहोरो मारमा परेका किसानलाई दैनिक गुजारासमेत चलाउन गाह्रो भएकोले उखु किसानको समस्याबारे सदनमा कुरा उठाउने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ५३६ निर्धारण गरिसकेको छ । तत्कालै चिनी उद्योग सञ्चालनमा पथ्र्यो अझै एक साताभित्र उद्योग सञ्चालनमा नआए आफूहरू उखु प्रदर्शनसहित सडक आन्दोलन गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको उखु किसान एवम् पश्चिम नवलपरासीका साविक कुडिया गाविसका पूर्वअध्यक्ष प्रेमचन्द्र गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि चिनीको मूल्यवृद्धि नभएसम्म सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम उखुको मूल्य किसानलाई दिन नसक्ने उद्योग सञ्चालकको भनाइ थियो । इन्दिरा सुगरमिलका सञ्चालक राम थापाले चिनीको मूल्य न्यूनतम प्रतिकेजी रु. ७८.१० पैसा कायम हुन सकेमात्र सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेबमोजिमको रकम दिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा उखु खेती गरिन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक करीब १८ देखि २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा झण्डै १० हजार परिवार उखु खेतीमा संलग्न छन् । विगतका वर्षदेखि जिल्लामा सात हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको छ ।